Izinto ezizokwenziwa kulezi zinsuku zikaKhisimusi eBarcelona | Izindaba Zokuhamba
Izinto ezizokwenziwa kulezi zinsuku zikaKhisimusi eBarcelona
UCarmen Guillen | | Barcelona, Spain amadolobha, Ukuzilibazisa
IBarcelona yidolobha elihle ukuvakashela noma ngasiphi isikhathi sonyaka, kepha ngoKhisimusi iba idolobha elikhethekile uma kunokwenzeka. Uma uku-Barcelona kulezi zinsuku, kungaba ngoba uhlala lapho, noma ngoba uvakashele izihlobo noma ngoba ufune ukunqamula kukho konke nakuzo zonke lezi zinsuku zikaKhisimusi futhi uye eBarcelona ngezinsuku ezimbalwa zokuphumula, lo mbhalo mhlawumbe izosiza kakhulu, ngoba sethula ezinye izinto zokwenza lezi zinsuku zikaKhisimusi eBarcelona.
Sezidlulile izinsuku ezimbalwa zikaKhisimusi, kepha kusele izinsuku ezintathu ezibalulekile ezisele: U-Eva Weminyaka Emisha, Iminyaka Emisha Namakhosi Amathathu. Thola ukuthi kwenzekani eBarcelona kulezi zinsuku futhi ujabulele le micimbi.
1 Umgubho Weminyaka Emisha Ka-2016
2 Hamba emigwaqweni ekhanyayo
3 Umbukiso Wamakhosi, kuGran Vía
4 Thenga izibalo ezinjalo ezijwayelekile ngeCagaTió kanye neCaganer
5 Isekisi noma itiyetha
6 Ukushushuluza eqhweni
Umgubho Weminyaka Emisha Ka-2016
E-Barcelona, ​​sizovalelisa onyakeni ka-2016 lapho bekuyindawo eyenzelwe khona eminyakeni yamuva: e UMaria Cristina avenue, ngombukiso ozoqala ngo-23: 30 ebusuku futhi ozophela cishe ngo-00: 10 ekuseni ngonyaka omusha, u-2017.
Umbukiso, okubandakanya ama-chimes ayi-12, uzokwakhiwa yi- Isikhala sendawo ezizoxhumanisa iMagic Fountain yaseMontjuïc, Isigodlo Sikazwelonke, uMaria Cristina Avenue, iVenetian Towers nePlaza de España. Kuzoba ngumbukiso wokukhanya, amanzi kanye neziqhumane lapho kuzosetshenzwa khona ngemultimedia choreography, lapho umculo kuzoba khona ophambili.
Hamba emigwaqweni ekhanyayo
Sonke siyazi ukuthi izimeya zamadolobha amakhulu zilwela kanjani ukwenza imigwaqo yazo ibe mihle kakhulu futhi ikhanyiswe ngoKhisimusi naseBarcelona bekungeke kube kuncane. Awukwazi ukuphuthelwa ukukhanyisa ezindaweni ezimaphakathi kakhulu: iCalle Pelai, iLas Ramblas ne-Avenida del Portal de Ángel. Ungababona njalo ntambama kusukela ngo-18: 00 ntambama.
Umbukiso Wamakhosi, kuGran Vía
La Umbukiso waMakhosi Kuyimakethe kaKhisimusi ebilokhu yenzeka kusukela ngo-1877. Kuyo singathola amadokodo angama-200 lapho kuthengiswa khona ubucwebe nezingubo ngezinto zokuhlobisa nangobumba. Futhi abakwazanga ukuphuthelwa ushokoledi oshisayo nama-churros ame, lapho amakhaza asebusika ezothwala kalula. Le makethe itholakala phakathi komgwaqo u-Urgell noMunater. UD
Ungakujabulela kusuka ngoDisemba 21 kuze kube nguJanuwari 6 futhi izovulwa kusukela ngo-11: 00 ekuseni kuze kube ngu-22: 00 ebusuku.
Thenga izibalo ezinjalo ezijwayelekile ngeCagaTió kanye neCaganer
El Shit "Yisilwane" sokhuni izingane esizishaya ngobusuku obandulela uKhisimusi, ngoDisemba 24, futhi siqukethe izipho nezinto ezincane eziwayo noma, njengoba kushiwo njalo, "shits" iTió.
El I-CaganerEndabeni yakhe, ungumuntu oyingqayizivele futhi ongu-100% waseCatalan okumele ukuthi wonke amaCatalan (nabangewona amaCatalan) abe neBethlehem. Kuyisimo sokuhlobisa esimweni "sokuzikhulula". Njengamanje, noma imuphi umuntu noma umuntu osesidlangalaleni "angavela" njengesibalo seCaganer, kusuka kuMerkel, kuya kuMaduro, ngo-Obama, u-Einstein noma imaski yeqembu le-Anonymus.
Isekisi noma itiyetha
Uma ufuna ukuya embukisweni nomndeni, nezingane, isekisi noma indawo yeshashalazi kungaba yizindlela ezingcono ongazicabangela. Le kweminye yemisebenzi futhi kukhombisa ukuthi ungabona kulezi zinsuku:
Uma ukufa kunikeze 'u-Rhum' umbukiso, umbukiso ka-Monti ', akumangazi ukuthi abangane bakhe babuyela endaweni yesehlakalo. Manje, ngombukiso omusha nokuphila okuningi ngaphambi kwawo. Lo mbukiso uzokwenzeka kuze kube nguJanuwari 8 2017 futhi izobanjelwa eTeatre Lliure eGrcia, eVila de Gràcia.
Umdwebi u-Ángel Llàcer uguqula umdlalo wamahlaya kaShakespeare futhi awubeke ngesikhathi segolide se-cinema ethandwayo yaseMelika yango-XNUMXs, eguqula ukugqokwa kwabathandi baseSicilia endaweni ebilayo ezobeka umngcele phakathi kwenganekwane ebunzimeni naseqinisweni.
Le ice rink inkulu kakhulu eYurophu (1200 m2) futhi itholakala maphakathi neBarcelona. Ifanele noma ngubani othanda ukushushuluza futhi ofuna ukujabulela umzuzu oyingqayizivele. Uma uya kuwo, kufanele wazi ukuthi intengo yehora elilodwa ngama-euro ayi-10, nokuthi leyo ngxenye yehora ngama-euro angama-7. Kuzovulwa kuze kube nguJanuwari 6.
Siyethemba ukuthi, noma ngabe useBarcelona noma cha, unokuphuma okujabulisayo konyaka kanye nokungena okujabulisa kakhulu konyaka ka-2017. Kwangathi ungajabula kakhulu!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Izinto ezizokwenziwa kulezi zinsuku zikaKhisimusi eBarcelona